Isbarbardhigga awoodda milatari ee Itoobiya iyo Suudaan | Xaysimo
Home War Isbarbardhigga awoodda milatari ee Itoobiya iyo Suudaan
Mas’uuliyiinta labada waddan ayaa isbuucyadii lasoo dhaafay warbaahinta isku marinayay eedeymo iyo hadallo kulul.
Yaa milatari ahaan awood badan?
Shabakadda ka faalloota arrimaha milatariga ee Global Firepower ayaa sanadkan soo saartay liiska 35 waddan oo ku yaalla Qaaradda Afrika, kuwaasoo ay qiimeyn ku sameysay awooddooda dhinaca milatariga.
Itoobiya waxay liiskaas ka gashay kaalinta 6-aad halka Suudaan ay ka gashay kaalinta 10-aad.
Markii si guud loo eego caalamka oo dhan, liiska dalalka dunida ee awooddooda la qiimeeyay oo ah 138 waxay Itoobiya ka gashay kaalinta 60-aad. Laakiin Suudaan ayaa sanadkan 2021-ka uga jirta kaalinta 77-aad.
Awoodda milatari ee Itoobiya
Itoobiya waxay ka mid tahay lixda waddan ee ugu awoodda badan qaaradda Afrika, marka laga soo tago waddamada kaalmaha ka horreeya ku jira ee Afrika, oo kala ah 1- Masar, 2-Algeria, 3-South Africa, 4-Nigeria, iyo 5-Morocco.
Qoraalka sawirka,Milatariga Itoobiya waxay bishii November dagaal culus la galeen xoogagga Tigray
Awoodda Milatari ee Suudaan
Suudaan waxay ku jirtaa 10-ka waddan ee ugu awoodda badan Qaaradda Afrika, liiskaas oo ay ku jiraan ilaa 35 dal.
Sida lagu sheegay xogta Global Firepower, shacabka Suudaan guud ahaan tiradoodu waa 45,561,556 qof.
Dadka awoodda u leh in ay ciidanka milatariga qaranka ku biiraan tiradoodu waa 24,147,625. Tiradaas waxay u dhigantaa 53.0% ka mid ah shacabka guud, waxayna xoogaa ka badan tahay kalabar.
Taas micnaheedu waa in dadweynaha Suudaan in ka badan kala bar ay gali karaan milatariga waddankooda.
Dadka sida ugu dhakhsiyaha badan ugu diyaarsan inay ku biiraan ciidanka tiradoodu waa 15,454,480. Sanad walba tirada shacabka Suudaan ee da’da milatariga loogu biiri karo gaara waa 1,205,449.
Sanadkan 2021-ka tirada ciidanka dalka Suudaan waa 190,000 oo askari. 105,000 oo askari ayaa si toos ah u shao taga oo howlgal sameyn kara. 85,000 oo askari ayaa keyd u ah milatariga dalka Suudaan. 20,000 oo askarina waa booliska sida milatariga u tababaran.
Awoodda ciidamada cirka
Suudaan waxay leedahay 45 diyaaradood oo kuwa dagaalka ah. 38 ka mid ah diyaaradahaas waxay gaar u yihiin dhinaca fulinta weerarrada. 22 diyaaradoodna waxay qaadaan saanadda milatariga, gaadiid ahaanna way u isticmaalaan ciidanka.
12 diyaaradood ayey milatariga Suudaan u adeegsadaan dhinaca tababarrada. Diyaaradaha qymaatiga u kaca ee loo yaqaanno Helicopters Suudaan waxay heysataa 73. 43 ka mid ah diyaaradahaasna waa kuwa weerarrada qaada.
Awoodda ciidanka dhulka
Milatariga Suudaan waxay leeyihiin 830 taangi. 450 gawaarida gaashaaman ah iyo 10 gantaal oo nooca iskood u istaaga ah.
Dhanka ciidamada badda, Suudaan waxay leedahay 18 markab oo 10 ka mid ah ay roondo ama kormeer ku sameeyaan biyaha waddankaas iyo xuduudaha badda ee uu la wadaago dalalka kale.
Dalka Suudaan wuxuu soo saaraa saliid sanad walba lagu qiyaasay 95,000 oo barmiil. Hase ahaatee isla dalkaas waxaa sanadkiiba laga isticmaalaa saliid dhan 96,000 oo barmiil.
Waxaase xusid mudan in Suudaan laga helay keyd saliid ah oo dhan 5,000,000,000 barmiil.
Miisaaniyadda sanadlaha ah ee ay Suudaan ku bixiso dhinaca difaaca waa $4,000,000,000 doolar. Deynta uu waddanka dibadda kasoo qaato waa $56,050,000,000.
Juqraafi ahaa, Suudaan dhulka ay leedahay waa 1,861,484 km. Xeebta Suudaan dhererkeeda waa 853 km. Xuduudda ay dalalka dariska la ah la wadaagto waa 6,819 km. Marin biyoodka la isticmaali karo ee ay Suudaan leedahay waa 1,723 km.